Miyuu daafaca Real Madrid ee David Alaba diyaar u noqon doonaa Final-ka Champions League? – Gool FM
Haaruun May 18, 2022
(Madrid) 18 May 2022. Daafaca Kooxda Real Madrid ee David Alaba ayaa taam u noqon doona kulanka final-ka Champions League oo ay 28 bishan May la leeyihiin naadiga Liverpool.
Ciyaaryahanka xulka qaranka Austria ayaa ka maqnaa Los Blancos tan iyo markii uu dhaawac ka soo gaaray intii lagu jiray lugtii hore ee semi-finalka Champions League ee kooxdiisu ay la ciyaartay Manchester City 26-kii April.
Alaba ayaa ahaa bedel aan la isticmaalin lugtii labaad ee Man City oo ka dhacday garoonka Bernabeu, halka uu dhibaatadaa ku seegay afartii kulan ee ugu danbeysay ee horyaalka ay ciyaartay Real Madrid.
Horraantii bishaan, waxaa laga cabsi qabay in 29-sano jirkaan uu ka maqnaado final-ka Champions League, maadaama ay arrintu noqotay mid adag in laga gudbo.
Laakiin, Alaba ayaa tababar la qaatay saaxiibadiisa kooxda Talaadadii shalay, iyadoo xiddigan reer Austria uu caddeeyay inuu taam u yahay inuu hoggaamiyo liiska xiddigaha Tababare Carlo Ancelotti ee final-ka koobka horyaallada Yurub ee ay la ciyaarayaan Naadiga Macallin Jurgen Klopp.